HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraMagaalada Ankara ee Diyaar u ah Jiilaal
05 / 12 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, WADADA, TURKEY
Caasimadda Ankara ee Diyaar u ah Jiilaalka; Iyada oo dhicitaankii faa'idadii ugu horreysay ee sanadka, kooxaha Caasimadaha Magaalo Weyn ee Ankara, ay bilaabeen inay la dagaallamaan barafka duurka jooga.
Kooxaha waaxda Sayniska, halbowlayaasha barafka, halbowlayaasha waaweyn, wadooyinka iyo boulevard ee looga soo horjeedo halista shaqada cusbada ayaa sii socota kala joogsi la'aan.
KOOXDA METROPOLITAN KAMIDU WAA INUU KU SAMEEYA SITE
Magaalada Ankara, tillaabooyin wax ku ool ah oo looga hortagayo muwaadiniinta inay la kulmaan cabasho ka dhan ah barafka caasimadaha Magaaladda, furitaanka wadooyinka bartamaha iyo degmooyinka ku xeeran, 150 kun oo tan oo milix ah iyo 7 / 24 oo ka ilaaliya khatarta jiing.
Dowladda Hoose ee Magaalada si ay ula dagaallanto barafka; Shaqaalaha 3 bin 12, qulqulka 173 barafka, kooxda gacanta ee 60, 298 tipper, 54 grader, 35 culeys, 83 culeys xire, Xareedka qodaalka 19 iyo 29 doser, halka ay xilsaarayaan waaxda Sayniska iyo Ururiska Aesthetics, lana dagaallama daadadka suurtagalka ah.
SHAQADA SALT EE MADAXWEYNAHA MARKA UGU FIIRSAN EE DHALASHADA MADAXWEYNAHA YAVAS
Dağıtım Waxaan rabnaa inaan ka dhigno shaqo cusbooneysiin ah anagoo wadna wadadeena saldhiga mitirka imece, ”ayuu yiri Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş.
Dhammaan xaafadaha, oo ay ku jiraan jidadka waaweyn ee jidadka kooxaha magaalooyinka waaweyni waxay go’aamin doonaan qodobbada ay leeyihiin hoggaamiyeyaasha xaafadaha, muwaadiniintu waxay u qaybin doonaan cusbo sida loo baahan yahay.
Iyadoo la ogaysiinayo muhtarsiyadaha magaalada magaalo-weynta leh farriin qoraal ah oo loogu talagalay codsiyada qaybinta cusbada, madaxa Waaxda Sayniska Sayniska ee muhaajiriinta aan heli karin cusbada ayaa soo wici kara Miiska '0312 ALO Blue Table' adoo wacaya N 507 43 40 0312 ama 507 43 41 153 Masa.
Hilal Tarman, Duqa Magaalada Etimesgut Topçu Neighborhood, wuxuu yiri: uk Waxaan codsannay cusbo isla markaana isla markiiba waa iswaafaqsan yihiin. Waxaan jeclaan lahayn inaan u mahadcelinno Madaxweynaheenna Mansur Yavaş ”. Waxaan gaari doonaa qodobbada aysan degmaddeenna gaari karin. Waxaan jeclaan laheyn inaan u mahadcelino Duqa Magaalada Mansur Yavaş ”.
Hawlgallada wadada tareenka waxaa loo wareejiyaa BUGSAŞ hal sano oo ku yaala caasimadda
Khadka tareenka xawaaraha sare ee xarunta dhexe ee caasimada Ankara
Maanta taariikhda: 29 Oktoobar 2016 Xawaaraha Sare ee Isgaadhsiinta ee Ankara ...
FARSAMADA TCDDY Gen. MAN. Mashruuca tareenka ee caanka ah Waxaan marayaa wadada isku xirta Ankara iyo Sincan waqooyiga…
Marka ugu horeysa caasimadda adduunka! 'Durak Ankara' ee Adeegga
Maanta Taariikhda: 29 Oktoobar 2016
Kooxo Dowlada Hoose ee Ankara
Diyaargarowga Ankara ee Jiilaal
Baraf ka da'ay Ankara
Waxaan ku xidhnay Badda Dhexe iyo Aegean tareenka